Izixazululo Zasekhaya Zangaphansi Kwemibimbi Yamehlo Nemijikelezo Emnyama - Isikhumba
Izixazululo Zasekhaya Zangaphansi Kwemibimbi Yamehlo Nemijikelezo Emnyama
Inqubo yokuguga ingokwemvelo futhi wonke umuntu ubhekana nalesi sigaba ngejubane lakhe. Ngokuvamile, inqubo yokuguga iqala lapho usuneminyaka yobudala engama-30, lesi yisikhathi lapho uqala khona ukubona izinguquko ezihlobene nobudala ezifana nemibimbi, imigqa emihle, izinwele ezimpunga nemibuthano emnyama ziqala ukugqama. Izingqinamba ezimbili ezivame ukubhekana nabantu imibimbi nemibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo ngoba isikhumba esingaphansi kwamehlo sincane kakhulu uma siqhathaniswa nesikhumba sobuso bonke. Isikhumba esingaphansi kweso sizwela kakhulu emvelweni, amakhemikhali nemisebe ye-UV ngakho-ke iba mncane futhi ilahlekelwe ukuqina kwayo. Le yindawo yokuqala ebusweni ekhombisa ifayili le- izimpawu zokuguga , ngakho ngaphansi kwamehlo kudinga ukunakekelwa okukhethekile nokunakwa.
Ngenkathi ubhadane lusihlasela, selukhulise isikhathi sethu sesikrini ngenxa yomsebenzi wasekhaya nokubukela ngokweqile obekuholele kwimibuthano emnyama nemibimbi. Ukukhanya okufakelwayo okuvela kumabonakude we-TV kanye ne-laptop kwenza isikhumba somile futhi kudilize i-collagen. Ngenxa yalokhu indawo engaphansi kweso ibukeka ikhathele futhi eyodwa ingahle ibonakale ingaphansi kwesimo sezulu. Okhilimu besikhumba anama-retinoid akhipha uvithamini-A, ama-antioxidants kanye ne-collagen angasiza ekwehliseni imibimbi ngisho nasekhumbeni lesikhumba. Ngaphambi kokufuna ukwelashwa, kufanele uzame amakhambi asekhaya ukwelapha imibuthano emnyama nemibimbi.
1. Imibuthano Emnyama
ezimbili. Isizathu Semibuthano Emnyama
3. Izixazululo Zasekhaya Lemibuthano Emnyama
5. Izimbangela Zemibimbi
6. Izixazululo Zasekhaya Zemibimbi
7. Ama-FAQ - Ukuza Kwemibuthano Emnyama Nemibimbi
Imibuthano emnyama iyinkinga ejwayelekile kakhulu kwabesilisa nabesifazane futhi kunezinombolo eziningi ze- izizathu ezibangela lokhu. Ngisho nosaziwayo babhekana nale nkinga kodwa ungakhathazeki lokhu kungaxazululwa kusetshenziswa amakhambi emvelo emizi.
Isizathu Semibuthano Emnyama
Ubudala- Imbangela ejwayelekile yemibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo akho ukuguga. Isikhumba siba mncane njengoba uguga ngakho-ke imithambo yegazi engaphansi kwesikhumba sakho iyabonakala kakhulu okwenza ukuthi isikhumba ngaphansi kwamehlo akho simnyama .
Ukucindezela KWAMAHLO- Ukwanda kwesikhathi sesikrini kungadonsa amehlo akho, ngenxa yokuthi imithambo yegazi ezungeze amehlo ingakhulisa okuzoholela emibuthanweni emnyama ngaphansi kwamehlo akho.
Ukwehla kwamanzi emzimbeni- Lesi ngesinye sezimbangela ezivame kakhulu zemibuthano emnyama. Lapho umzimba wakho ungatholi inani lamanzi olidingayo, isikhumba esingaphansi kwamehlo siqala ukubukeka sifiphele futhi simnyama.
Izixazululo Zasekhaya Lemibuthano Emnyama
1. ICold Compress
Lapho imithambo yegazi ivuliwe, ingakwazi mnyama amehlo angaphansi . Ukucindezela okubandayo kuzovimba imithambo yegazi ekhanyisa imibuthano emnyama.
Thatha izingcezu eziwugqinsi zekhukhamba noma uligaye futhi uliyeke lishaye esiqandisini cishe imizuzu engama-45-50. Bese ubeka ikhukhamba elibandayo endaweni ethintekile okungenani imizuzu eyi-10. Yenza lokhu kwelashwa kabili ngosuku.
3. U-Vitamin E no-Almond Oil
Hlanganisa inani elilinganayo lamafutha e-alimondi novithamini E bese ukugcoba ngaphambi kokulala. Massage lokhu unamathisela kufayela lakho le- imibuthano emnyama ngobumnene . Geza ekuseni ngamanzi abandayo. Phinda lokhu njalo ebusuku uze ubone umehluko.
4. Izikhwama Zetiye
Cwilisa izikhwama zetiye ezimbili emanzini afudumele bese upholisa izikhwama zetiye efrijini imizuzu eyi-10 kuye kwengu-15. Khipha ifayela le- izikhwama zetiye kusuka efrijini bese uzibeke esweni ngalinye. Yishiye imizuzu emihlanu bese ususa izikhwama zetiye bese uyigeza ngamanzi abandayo.
Ama-antioxidants ku utamatisi uyasiza ekulungiseni ukushintsha kombala ezungeze amehlo. Hlanganisa isipuni esisodwa sikalamusi katamatisi ngesipuni esisodwa sikalamula bese usifaka ngaphansi kwamehlo. Geza ngamanzi abandayo emva kwemizuzu engu-15. Ungaphuza ujusi wetamatisi ngokugcina isikhumba esinempilo.
6. I-Almond Amafutha Nelamula Lejusi
Thatha isipuni esisodwa samafutha e-alimondi uwahlanganise namaconsi ambalwa kalamula kalamula, uwahlanganise bese kusetshenziswe ngaphansi kwamehlo . Imasaje bese uyishiya iphumule imizuzu engu-4-5 bese uyigeza ngamanzi.
Ngaphansi kwemibimbi yamehlo qala ukuvela maphakathi naphakathi noma ngasekupheleni kweminyaka engama-30. Uma uchitha isikhathi esiningi ngaphandle kwalezi imigqa yombimbi qala ukuvela eminyakeni yakho yokuqala engama-30. Ungazama amakhambi ambalwa asekhaya ukwelapha le mibimbi.
Imisebe ye-UV Uma ungasebenzisi ukuvikelwa kweso okudingekayo, imisebe ye-UV izoqala ukwephula i-collagen esikhunjeni sakho. Lokhu kuzokwenza kubangele imibimbi kanye nemigqa emihle. Ukungcoliswa kwemvelo nakho kungadala imibimbi.
Ukubhema- Lo mkhuba ubeka isikhumba kokungeziwe ukucindezeleka okwenziwe nge-oxidative , ephula i-collagen ne-elastin. Lokhu kubuye kuvimbele izakhamzimba ekufinyeleleni emithanjeni yegazi yobuso njengoba kuthinteka okuncane ukujikeleza kwegazi okubangela imibimbi.
Ukudla Okushukela Okuphezulu- Ukudla okunoshukela ophakeme kuncane kuma-antioxidants futhi kungabopha inqubo yokuguga eholela emigqeni emihle nemibimbi ngaphansi kwamehlo.
Izixazululo Zasekhaya Zemibimbi
I-Aloe Vera inezindawo eziningi zokuphulukisa. Faka i-aloe vera gel kwimibimbi bese uyihlikihla imizuzu emihlanu, bese uyigeza ngamanzi abandayo. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukusebenzisa i-aloe gel kuzokwenza ukunciphisa imibimbi futhi wandise i-collagen esikhunjeni sakho ngenkathi usigcina sinamanzi.
2. Ubhanana Mask
Mash ingxenye yesine kabhanana bese wenza unamathisela obushelelezi. Faka lokhu esikhunjeni sakho bese usishiya imizuzu eyi-15-20 bese uyigeza ngamanzi afudumele. Ubhanana unayo amafutha emvelo kanye namavithamini akhulisa impilo yesikhumba sakho.
3. Umhlophe weqanda
Endishini thatha iqanda elimhlophe bese ulihlanganisa, faka lokhu kunamathisela kumibimbi yakho. Shiya lokhu kuze kome futhi kwenze isikhumba sakho sinwebeke, ukuhlanze lokhu ngamanzi abandayo. Umhlophe weqanda uyancipha ukujula kwemibimbi futhi kusiza ekukhiqizeni i-collagen. Uma uxabana namaqanda kufanele ugweme ukuwasebenzisa.
4. Uvithamini C
UVitamin C yi-antioxidant ekhiqiza noma edala i-collagen esikhunjeni. Ukufaka isicelo se- i-vitamin C serum kungasiza ekunciphiseni imibimbi. Kuyasiza futhi ekugcineni isikhumba sinamanzi futhi kwehlise ukuvuvukala.
5. Amafutha weTurmeric neCoconut
Thatha ingcosana ye-turmeric uyixube nesipuni samafutha kakhukhunathi. Faka le ngxube ngaphansi kwamehlo bese uyihlanza ngemuva kwemizuzu engu-15-20. Uma ufuna ungangeza amaconsi ambalwa kawoyela we-alimondi.
Thatha uhhafu wesipuni seyogathi usixube nethisipuni ye rose amanzi noju. Faka la manzi ebusweni naseduze kwamehlo. Geza ngamanzi afudumele ngemuva kwemizuzu eyi-15-20.
Ama-FAQ - Ukuza Kwemibuthano Emnyama Nemibimbi
U. Ziyelapheka imibuthano emnyama?
TO. Kunemithi ethile engalapha imibuthano emnyama njengamaxolo amakhemikhali, imishanguzo ye-laser, amakhambi asekhaya njll. Nokho, kuya ngokuthi amnyama angaphansi amnyama kanjani.
U. Ungayelapha kanjani imibimbi ezungeze amehlo?
TO. Ungaxhumana nodokotela wesikhumba abazokunikeza imithi noma basikisele ukwelashwa nge-laser, noma ungazama namakhambi asekhaya ngokufanayo.
U. Yikuphi uvithamini okulungele imibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo?
TO. Uvithamini K, A, C, E, B3 no-B12 basiza ekwehliseni imibuthano emnyama. Umuntu angangeza izithelo, imifino kanye neminye imikhiqizo ekudleni njengoba lokhu kunothe kulawa mavithamini ashiwo. Ukudla okunjalo okunempilo kuyasiza ekugcineni isikhumba futhi kugcina kuphilile futhi kukhanya ngaphansi kweso.
susa unwele lobuso ekhaya unomphela
kanjani ukuqeda izinwele zobuso ngokwemvelo
isisombululo sokulahlekelwa izinwele ekhaya
izindlela zemvelo zokuvimbela ukulahleka kwezinwele